ဤသည်လိဒ်ကျောင်းသားကသူ့အားလူးဝစ် THEROUX အကြောင်းသူမနှင့် ပတ်သတ်၍ တွစ်တာတွင်သူကြိုက်ခဲ့သည်။ - သတင်း
သူတို့ရဲ့သူရဲကောင်းအပေါ်စာတမ်းတစ်စောင်ရေးသားဖို့ရွေးချယ်တဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာအလွန်သေးငယ်တဲ့, သတ္တိစက်ဝိုင်းရှိပါတယ်။ ငါကရဲရင့်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခြားသူတွေကခေါင်းစဉ်တစ်ခုရွေးကြတာကိုသူတို့အကောင်းဆုံးရနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ခေါင်းစဉ်ကိုရွေးနေတုန်း၊ ဒီကျောင်းသားတွေဟာပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါသူတို့ရဲ့သူရဲကောင်းကိုအခွင့်အလမ်းတစ်ခုတည်းအတွက်သာလပေါင်းများစွာကြိုးစားအားထုတ်ကြရတယ်။
ရဲရင့်သောကျောင်းသားအနည်းငယ်တွင်အမှန်တကယ်တုန့်ပြန်မှုရရှိသောကံကောင်းသည့်လူနည်းစုလည်းပါဝင်သည်။ ၎င်းသည်ရှားပါးသော်လည်းမဖြစ်နိုင်ပါ - ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကလီဗာပူးလ်ဂျွန် Moores မှကျောင်းသားသည်သူမ၏အက်စ်ကိုဒေးဗစ်အက်တ်နန်နိုကိုရေးသားခဲ့သည်၊ ဒီနှစ်မှာတော့သူမလူးဝစ် Theroux အပေါ်သူမ၏ diss ရေးသားခဲ့သည်သူတစ် ဦး လိဒ်ကျောင်းသား Chloe ရှိမုန်, ကတွစ်တာ, သူ့ကို tagged သူအမှန်တကယ်ကြိုက်တယ်။
Chloe ၏တွစ်တာတွင်ဖတ်ရသည်မှာ @louistheroux ၇ ရက်နှင့်တင်သွင်းသည့်အချိန်အထိရေတွက်သည်
သင်လူးဝစ်၏ပရိသတ်ကိုဖြစ်စေ၊ မသည်ဖြစ်စေသူသည်တီဗွီ ဒဏ္’sာရီ တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့၏ tweet များကိုနှစ်သက်ပါကမည်သူမဆို chuffed လိမ့်မည်။ Chloe ၏ကြီးမားသောကိုးကွယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်သူမသည်သဘာဝအားဖြင့်၎င်းနှင့်ပတ်သက်သောဓာတ်ငွေ့ဖြစ်သည်။ သူမကဒုတိယအကြိမ်တွစ်တာတစ်ခုတင်ခဲ့သည်။ LOUIS THEROUX MY TWETIK like !!! Louis Thoux ငါရှိတယ်ဆိုတာသိတယ် !!
သူမ၏စာတမ်းတစ်စောင်တင်သွင်းများအတွက် Chloe ရဲ့တရားဝင်ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါသည်: သူဘယ်လိုသူ Theroux သနည်း ဘီဘီစီမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များတွင်လူးဝစ် Theroux ရဲ့စတိုင်တစ်ခုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ သူမသည်သူမအမြဲလူးဝစ်ရဲ့အလုပ်၏ကြီးမားသောပန်ကာဖြစ်ပေမယ့်သူမအထိန်းကအကြံပြုသည်အထိသူမ၏ diss သို့ဤချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုလမ်းကြောင်း၏စဉ်းစားခဲ့ပါဘူးရဲ့ပြောတယ်
ငါသူ့ကိုချစ်နှစ်ပေါင်းများစွာပြုမိပါပြီ, သူကဆိုသည် ဒုတိယနှစ်အစတွင်ဆရာတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်၏စာတမ်းကိုကျွန်ုပ်အပေါ်ရေးသင့်ကြောင်းပြက်လုံးပြောခဲ့သည်။ ဒီအထိန်းသည်ကျွန်ုပ်၏ diss ကြီးကြပ်ရေးမှူးဖြစ်ခြင်းကြောင့်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
သူမစက္ကူကိုမတင်ရသေးပေမယ့်သူမလူးဝစ်ကိုတွစ်တာမစောင့်နိုင်ဘူး။ ယခုတွစ်တာတွင်နှစ်သက်မှု ၁၅၉ ခုရှိပြီဖြစ်ပြီးလူတွေကသူတို့ဖတ်နိုင်မလားဟု Chloe အားမေးမြန်းနေကြသည်။ သူမသည် The Tab ကိုပြောကြားခဲ့သည်: ငါချော့မော့ပေမယ့်အဲဒါကိုများအတွက်လုံလောက်သောကောင်းသောဖြစ်လိမ့်မယ်မသေချာဘူး။
လူးဝစ်ကိုအမှန်တကယ်ပြန်လည်ဖြေကြားရန်နောက်ဆုံးကြိုးပမ်းမှုအနေဖြင့်သူသည်တင်သွင်းပြီးသည့်နောက်တနင်္လာနေ့တွင်သူ့ကိုထပ်မံရေးရန်စီစဉ်နေသည်။ ငါလာမယ့်သီတင်းပတ်အတွင်းသူပြန်ပြောမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် ... ငါကတင်သွင်းရဲ့ဟုပြောသည် ... တစ် ဦး ကောင်မလေးတစ်ယောက်အိပ်မက်မက်နိုင်ပါတယ်။
သူမသည်ကြီးမားတဲ့ရိုက်ကူးပါတယ်။ ငါတကယ်က Chloe ကချွတ်မျှော်လင့်ပါတယ်, သင်ရုံဘာမျှမက x အဘို့သင့် diss ပျက်ကွက်ကြပြီမဟုတ်
သင်သည်သင်၏ diss ကိုစံချိန်တင်အချိန်၌ရေးသားခဲ့သည်သို့မဟုတ်ပြက်လုံးအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါကဆက်သွယ်ပါ။ သင်၏နာမည်၊ တက္ကသိုလ်နှင့်သင်၏ diss ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအီးမေးလ်ဖြင့်ပို့ပါ။
•တတိယနှစ်တွင်သူမ၏စာတမ်းကို David Attenborough သို့ပို့ခဲ့ပြီးသူပြန်ဖြေခဲ့သည်။
•ဤ Durham ကျောင်းသည်သူမ၏စာတမ်းကိုရှစ်နာရီအတွင်းရေးခဲ့ပြီး ၂: ၁ ကိုရရှိခဲ့သည်
•မင်းရဲ့အင်ဂျင်ကိုစတင်ပါ။ ဒီမိဖုရားက RuPaul ရဲ့ Drag Race မှာသူမရဲ့စာတမ်းကိုရေးခဲ့တယ်